Taariikhda Horumarinta - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Sichuan Jinxing qalabka tamarta nadiifka ah Co., Ltd., waxaa la aasaasay., ku takhasusay R & D, wax soo saarka iyo adeegga kombaresarada kala duwan, LNG, saliidda iyo gaaska sifaynta skid rakiban, weelasha cadaadiska iyo dhuumaha cadaadiska.
Sichuan Rongteng automation equipment Co., Ltd., la aasaasay, waa shirkad-farsamada sare ee isku dhafka naqshadeynta, wax soo saarka, iibinta, rakibaadda injineernimada iyo adeegga iibka ka dib ee qalab otomaatig ah oo dhamaystiran iyo koronto gaaska.
Waxaan galnay warshadaha gaaska dabiiciga ah.
Sichuan Hengzhong tamar nadiif ah oo dhamaystiran wax soo saarka Co., Ltd., ayaa la aasaasay.Waa shirkad si buuxda loo leeyahay oo ah Sichuan Jinxing qalabka tamarta nadiifka ah Co., Ltd. Shirkaddu waa bixiye adeeg oo ku takhasusay naqshadaynta, R & D, wax soo saarka, rakibidda iyo hawlgalka qalabyada dhamaystiran ee daaweynta saliidda cayriin, madaxa ceelka. daaweynta, nadiifinta gaaska dabiiciga ah, soo kabashada hydrocarbon khafiif ah iyo liquefaction gaaska dabiiciga ah ee beeraha saliidda iyo gaaska kala duwan.
Waxaan u guureynaa saldhigga cusub ee wax soo saarka.
Sichuan Rongteng waxay samaysay iibka caalamiga ah ee shirkadda oo dhan.
Waxaan baarnay oo aan horumarinay gaaska dhaliyaha.